UN: Midnimada & Madaxbanaanida Soomaaliya waa lama Taabtaan – VIDEO • Horseed Media
You are here: Home / Featured / UN: Midnimada & Madaxbanaanida Soomaaliya waa lama Taabtaan – VIDEO
UN: Midnimada & Madaxbanaanida Soomaaliya waa lama Taabtaan – VIDEO
June 8, 2018 - By: Maxamed Cismaan
Qoraalkii Khamiistii laga soo saaray Golaha Amaanka ee ku aadanaa Soomaaliya ayaa lagu qeexay in Qaramada Midoobay ay markale si cad u sheegayso in Midnimada iyo Madaxbanaanida dalka Soomaaliya aan la farogelin karin.
Warkan kasoo baxay Golaha Amaanka ayaa waxaa si buuxda u wada taageereen 15-ka wadan ee xubnaha ka ah golahaasi oo kala ah; Ruushka (Guddoonka sanadkan), Maraykanka, China, France, UK, Bolivia, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Ethiopia, Kazakhstan, Kuwait, Netherlands, Peru, Poland iyo Sweden.
Warka uu Golaha shalay kasoo saaray arrimaha Soomaaliya qeybta looga hadlay Midnimada & Madaxbanaanida dalka ayaa lagu yiri;
Golaha Amaanka wuxuu markale cadeenayaa xushmada loo hayo Madax-banaanida (Dhulka iyo Siyaasad) iyo Midnimada guud dalka Soomaaliya. Golaha wuxuu ogsoon yahay farogelinta gudaha iyo shisheeye ee lagu khal khal gelin karo Midnimada Soomaaliya. Wuxuu Golaha u arkaa muhiim in laga shaqeeyo in xiisadaha gobalka ka jira aysan saameyn ku yeelan Soomaaliya, waxaana loo baahan yahay in Soomaaliya iyo dhamaan dalalka daneeya Soomaaliya (Beesha Caalamka) ay ka wada shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa “Nidaamka Federaalka” iyo hay’adaha dowlada loona xaqiijin lahaa Nabadeynta iyo dib u dhisida dalka…
Hadalka kasoo baxay Golaha Amaanka ayaa kusoo beegmay xili dowlada Soomaaliya ay dacwad ka dhan ah Imaaraatiga u gudbisay Golahaasi, kadib heshiiskii dekkada Berbera oo saami laga siiyey dowlada Itoobiya oo iyadu kamid ah xubnaha sanadkan ee Golaha Amaanka, waxaana xusid muddan in Dowlada Itoobiya ay taageertay baaqa shalay kasoo baxay Golaha Amaanka.
Wuxuu qoraalkan sidoo kale fariin u ahaa Somaliland oo iyadu xiligan diidan inay ka mid noqoto hawlaha socda ee dhismaha nidaamka Federaalka, iyadoo dhamaan dalalkaasi xubnaha ka ah Golaha Amaanka ay sheegeen in midnimada Soomaaliya ay tahay lama taabtaan.
Xiisada Sool, ee u dhaxeysa Puntland iyo Somaliland ayaa lagu sheegay in laga rabo in labada maamul ay ciidamadooda ka dul qaadaan dhulka uu dagaalka ka dhacay, isla markaana xabad joojin dhaqan geliyaa, sidii ay horey Beesha Caalamka uga balanqadeen labada dhinac.
Balse hogaamiyaha Somaliland Musse Biixi ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay ka dhego adeegay baaqa Beesha Caalamka oo ahayd in ciidamada Somaliland laga qaado Tukaraq lana geeyo deegaanka Oog ee gobalka Sool, halka ciidamada Puntland iyagana dul fadhiya Tukaraq loogu baaqay in dib loo celiyo.
Macada qaabka ay Somaliland uga jawaabi doonto go’aanka kasoo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Hogaamiyaha Xisbiga UCID ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo shalay shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyey mid kamid ah Beelaha Degga Puntland inay ka danbeysay kulanka Golaha Amaanka uu ka yeeshay arrinta gobalka Sool!
“…Waxaan ognahay in Golaha Amaanka maanta kulan ka yeelanayo Soomaaliya waxaana ka danbeysa beeshaasi reer Garowe…”ayuu yiri Faysal Cali Waraabe oo sheegay in Puntland wado duulaan ka dhan ah Somaliland.
Xiisada dalalka Khaliijka: Dowlada Imaaraatiga ayaa iyadu horey u sheegtay inay mar walba tixgelin doonto Midnimada iyo Madax-banaanida Soomaaliya, balse waxaan weli dhamaan dadaalada la sheegay in laga dhex wado Villa Soomaaliya iyo Abu Dhabi oo la sheegay inay ku jiraan dalal kale oo uu kamid yahay Sacuudiga.
Golaha Amaanka ayaa qoraalkan lagu taageerayo Midnimada Soomaaliya soo saaray xili Khamiistii shalay ay magaalada Muqdisho booqasho rasmi ah ku tagtay Rosemary DiCarlo oo ah Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Siyaasada.
“…Booqashadeyda waxay tusaale u tahay ahmiyada gaarka ah oo uu dalka Soomaaliya noo leeyahay, wuxuuna si buuxda u taageerayaa Xoghayaha Guud dadaalka ka socda dalka Soomaaliya…” ayey tiri Rosemary DiCarlo.
Waxay sidoo kale sheegtay in “Midnimada” Soomaalida ay fure u tahay hirgelinta Nidaamka Federaalka, la dagaalanka Xagjirnimada iyo wax ka qabashada caqabada dalka horyaal iyo u adeegida shacabka.